🥇 ▷ ASUS runtii waxay rabtaa mustaqbal halkaas oo ay kambuyuutarro laptop leeyihiin labo (ama kabadan) shaashad ✅
ASUS runtii waxay rabtaa mustaqbal halkaas oo ay kambuyuutarro laptop leeyihiin labo (ama kabadan) shaashad
ASUS runtii waxay rabtaa mustaqbal halkaas oo ay kambuyuutarro laptop leeyihiin laba (ama kabadan) shaashado! – Haddii ay dhacdo inaad u isticmaasho PC maalin kasta shaqada ama guriga, waxaad lahaan kartaa laba kormeer ama ka badan. Ama ugu yaraan kumbuyuutarkaada kumbuyuutarka kor kala xiriir kormeeraha dibadda si aad u haysatid qol yar oo dheeraad ah oo aad wax ku qabato.
Hagaag, ASUS waxay horeyba u ogaatay inay adeegsadayaashu u baahan yihiin boos badan oo mashiinadooda ah. Markaa waxaad go’aansatay inaad isku daydo nasiibkaga aad ku leedahay hirgelinta laba shaashad oo aad u xiiso badan adduunka buugga xusuusinta! Wax uun nasiib wanaag iyo shaqo adag, ayaa gabi ahaanba beddeli kara sawirka waxa maanta laptop ah.
ASUS ZenBook Pro Duo: Mustaqbalka laptops-yada runti waa mid aad u xiiso badan!
Markaa haddii aad barnaamij barnaamij-sameeye tahay, waxaad u badan tahay inaad leedahay laba kormeerayaal oo aad la shaqeyso, ama ugu yaraan hal kormeere oo leh qol fara badan oo leh laba daaqado ama in kabadan oo dhinac dhinac ah.
Dhanka kale, haddii aad tahay naqshadeeye jaantus ah, oo leh dhowr kontorool ama gaagaaban kaliya taabasho ayaa sidoo kale ah wax yaabo badali kara noloshaada. ku filan in ka fiican iyada oo loo marayo sharadka weyn ASUS.
Marka la soo koobo, fikradda weyn ee ASUS oo leh Fiirso shaashadda (shaashadda labaad ee korka keyboard-ka) ee “ZenBook Pro Duo” waxay soo bandhigeysaa shaashad labaad oo heer sare ah si sare loogu qaado wax soo saarkaaga! Hadday tahay koodh muuqaal ah, inaad aragto tabo kale oo badan oo Chrome ah, gaagaaban, hagitaan ciyaarta, ama xitaa socodka ciyaarta kubada cagta ah… Waa adduunka oo dhan suurtagalnimada hadda furan!
Tani waxay noqon kartaa wax aan caadi ahayn in wax la akhriyo… Laakiin waxaan xitaa dareensannahay in mustaqbalka dhow, helitaanka laptop hal shaashad ah ay adkaan doonto
Gaar ahaan haddii ASUS ay u qaadan karto naqshaddan masjidka. Xaqiiqdii waa wax ay sumaddu isku dayday inay ku sameyso ugu yar ee u qalabaysan ZenBook Duo laga bilaabo € 1699.
Ugu dambeyntiina, nooca calanka (Pro Duo) wuxuu la yimid aaladda Intel Core i9 9980HD CPU, kaararka sawirada RTX 2060, 1TB SSD disk iyo 32 GB oo RAM ah. Qaabka miisaaniyaddu (Duo) waxay la socotaa qaybo kudarsan boorsada jeebkaaga, iyagoo keenaya Intel Core i7 CPU, kaararka sawirada GeForce MX250 iyo 16GB oo RAM ah miiska.
Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato mashiinadan, dhagsii halkaan.